Lahatsoratra nataon'i Natasa Djukanovic momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Natasa Djukanovic
Fantatrao ve fa manodidina ny 93% amin'ireo mpampiasa no manomboka ny traikefany amin'ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fanoratana ny fangatahana ao anaty motera fikarohana? Tsy tokony hahagaga anao ity tarehimarika ity. Amin'ny maha mpampiasa Internet antsika dia lasa nahazatra anay ny nanamora ny fitadiavana izay tena ilainay ao anatin'ny segondra vitsivitsy avy amin'i Google. Na mitady fivarotana pizza misokatra eo akaiky eo izahay, tutorial momba ny fomba amam-bolo, na ny toerana tsara indrindra hividianana anaran-tsehatra, manantena izahay eo noho eo
Tsy maro ny orinasa no mahalala ny zava-drehetra amin'ny fotoana hanombohany ny tranonkalany. Mifanohitra amin'izany aza, saika ny 50% amin'ireo orinasa madinidinika dia tsy manana tranokala akory, mainka moa fa ny marika iray izay tadiavin'izy ireo hamboarina. Ny vaovao tsara dia tsy voatery ho voatery hamoaka izany rehetra izany avy hatrany amin'ny ramanavy ianao. Rehefa vao manomboka ianao, ny zava-dehibe indrindra dia izany - manomboka. Manam-potoana hanaovana fotoana foana ianao